Gaafi uumataa deebsiifu kayyoo Bilisummaa dhugaa bakkan ga’uuf tokkuman hojeechutuu furmataa
Ijoo Dubbii GPO/OPC
Oromoon Kana booda diina jala hin hiriruusi, diinafsi hin bulu, Habashan haafnan ilmaa Waqayoo ilee yoo bu’ee dhiteen sii bulcha yoo jeedhe hin fudhatuu, dhaabilee siyyassa Oromoo kan beekuu qabu. Yeero ama kana Uummani Oromoo dhabbilee siyyssa Oromoo Caalaa qoofa isaa Habasha falmata jira. Oromoon Habasha ajeefatee kan jiruuf sababa tokko malee miti. Habashan Oromoo irrati yaakaa waggoota 130 dalganfi dhifama gafatani hin beekan. Samuun isaan Minilik-H/Silase, Mengistu, Melese, Brihanu hundi ishee Oromoo Baleesuu yaadi Oromoo kan siirti beeka kan garaaf bulee malee.
Habashan samuun ishee tokko Minilik Goban Dacee fi Abba Malaa qabatee (yabatee), Haila Sisalesn Abbaa Jirafa, Kumsa Morada qabatee, Mengistun Tasafayee Dinqa, Damsee Bulto qabatee , Malese Abba Dula fi Bacaa Dabalee qabatee, Birihanu Nega amoo Kamal Galchuu fi Hailu Gonfa qabatee (yabate) nu bulchuuuf yaadu Malee Mirga dhala nama deemokrasii fi haqa kan jeedhu kijiba HBASHAt kijibu malee dhugga miti. "Ye Muutaan Lijoochi " waan abboon isaan durii hojeetan irra deebiyyan hojeetaa jiru, "Ye-Mutaan Lijoochi" fi ijooleen isaan tokko boola tokkoti awalamuu qabu malee mariin isaan waliin goodhamuu hin jiru.
Jijjirama ABO dhaaba habashatu Oromoo qooqooduuf waan ijaareef erga ijaraman kassan goocha Habasha hojeecha turan ama ilee itii jiru:-
1. lubuu qabsa’oota qaqaroo heeduuu Asabiti ficisisan;
2. Qabsoon Oromo WBO ijoolee wara Ganda abbaluuti jeedhan bishanf midhan, qunamtii irra kutan goolba Kenya, Somaliya fi Ethiopia gidutii qoonqoon akka dhuman goodhan;
3. Hawwassa Oromoo ganda gandan qooqodan wal dura dhaaban,
4. Meesha qabsoo fi qabsa’oota Oromoo diinati TPLF galchan
5. Marii Jijjiramii fi Ginbot7 Atlanta, Dalas, Germany fi DC goodha yakka Annoolee fi Callii Calanqooti Oromoo irrati goodhamee caalaa uummataa Oromoo kan Hamilee Cabsee fi qanfachisee waan ta’ee akka yaakaa yaaka caaluti galma’ee uumataa Oromoo yadatama,
6. Jijjirami haftee amoo Kayyoo Uummataa Oromoo Ginbot7 guguratan Habashati Galan;
Jijjirami Habashan ijaramtee Walkan dura deema ishee waliin Ginbot7 , walakan amoo ittiana dura deema waliin TPLFti galtee Oromumma awalan Habasha ta’aani. Qabsoo Ummatiin Oromoo gegesssa ture faalaa isaa hojeetan. QBO hundi siiri akka hin tanee falamuun, diini kan jeedhuu dhugoomsuun, jijirami fi miseensoon isaa summi fi ergama diina qabatan jiru ama ilee hadhan sun keessa hin dhumnee.
Ummani Oromoo yamuu ama kan yomii irraa caalaa Habashan midhama fi dararamaa waan jiruf, Jeequmssii fi cacabinsii Oromoo qanfachisee, salphisee jira, kanaafu salphina fi tuffii Habasha kana jala bayee Bilisummaa dhugga fi abba biyyumaa isaa mirkaneefachuuf murteefatchuuf dirqame jira. Tokkumman Atataman Oromumma Bala irra hambisun ama sababin isaa:-
Lafi Oromoo guutman gutuuti Gurguramee qixeefamee jira kun dafamee qaqabamuuf qaba.
Baratooni Oromoo wagga waqaan ji’a ji’aan mana hidhati guraman akka hin baranee goodhaman qoofa isaan TPLF lola waan jiran degersaa atatama barbaduu,
Lammiin Oromoo 40,000 mana hidha jiru darara gudda keessa jira malee Harama Ethiopia hodha hin jiru
Habashoon Ummata Oromoo walloo fixan yaaka Anolee fi Calanqoo dalagan fi Uummataa Oromoo walaka fixaan ama ilee fixaa jiru fixuuf ilee karooora qabu,
TPLF Saboonummaa Oromummaa baleesuuf jeechan afaan Oromoo dhorkitee jirti, wal dorgomiin, agarsisi adda fi afaan hundi Afaan Amharan akka ta’uu goochaa jirtin kan dhabuuf amumaa uumata keenya birra ga’uu qabna.
Magaalaa Keessa fi nannoo ishe irra Oromoon guutuman gutuuti buqafamee dalidaaltooni Oromoo daldala irraa Ariaman Habashoon qoodatan jiru;
Oromoon Ginbot7 kaleesssa dhaabateen Tufatamuun salphina salphina caaluu keessa galee jira,
Biyyoon Oromiyya Summi fi Asidiin badee jira, Bishan Oromiyya Summi warsha fi Ababoon Badee jira,
Waluma Galati Badiisan Enyuumaa Oromoo dabamsisuuf deema jiru dhabisisuu qaban.
Kanaaf, Dhaabota Maqaa Oromoo qaban hundi, hawaasa Oromoo bakkoota adda addaa jiran, hayyotaa fi beektooti Oromoo fi jaarmayan dargaggoota Oromoo haala amma jiru kana geddaruuf marii hunda haammatu gaggeessun irraa eegama jenna. Mariin akkasii konfiransii dhaaboti Oromoo, jaarmayooti, beektooti, haayyooti, dargaggooti fi hawwan irratti hirmaatan tokko gaggeessuun mirkanaawa. Balaa guddatu akka sabaatti nutti aggaamatamee jira. Balaa kana jalaa bahuuf marii sabaa gaggeessuutu Dhabbileen Oromoo Kayyoo Bilisumaaf dhabatan qoofan QBO shafsisun Oromiyya Bilisoomsuuf walliin hojeechu qabu. Dhabbilee Oromoo Feedhi ummataa Eguun Gaafi uumataa deebsiifu kayyoo dhugaa fi kayyoo ganama bakkan ga’uuf tokkumaan hojeechutuu furmataa.